Zvinoumba Sourcing - Shenzhen KAISHENG pcb CO., LTD
Yakakwira Frequency pcb
Pcb Assembly Zvandakashanda
Quick Dzokai pcb Assembly
Kumumvuri pcb Assembly
Vhoriyamu pcb Assembly
PCBA Kugona & Mamwe masevhisi
Pcb gungano kugona
Dunhu Bhodhi Gungano
Pcb Assembly Mugadziri
Electronic Assembly Makambani
Pcb nhema uye Assembly
Yakadhindwa Circuit Board Assembly
Pcb Kugadzira Uye Gungano
Matipi & Tricks
Mushure memakore ekushanda nesimba, PCBfuture yakagadzira kudyidzana kwakasimba nekubatana pamwe nevanozivikanwa vepasirese zvikamu, izvo zvakatigonesa kuwana izvo zvemhando yepamusoro kubva kune vanobvumirwa vatengesi nevakagadziri. Ikozvino, PCBfuture ine gumi nematanhatu mainjiniya ekutenga uye isu takagadzira nzira dzakarongeka uye dzakaringana nzira dzekutsvagisa zvigadzirwa zvemagetsi. Mabasa edu ese anotibatsira kupfupisa cheni yekutenga uye kuwana zvikamu zvepakutanga nemutengo wepamusoro. Kunze kwezvo, Yedu pcb Assembly BOM kotesheni inotungamira nguva inogona kukurumidza semaawa makumi maviri nemana.
Yakakwira Mhando Yemagetsi Magetsi
Pcbfuture gara uchiziva mhando ndicho chinhu chakakosha chevatengi, uye izvo zvinhu ndizvo chikonzero chikuru cheyemagetsi bhodhi raigona kushanda kwenguva refu kana kwete. Kubva ipapo, isu tinovaka kubatana kwakasimba neavo vane mvumo uye vane mukurumbira vezvinhu vatengesi, kusanganisira Arrow Electronics, Mouser, Avnet, Digi-kiyi, Farnell, Ramangwana Electronics, nezvimwewo. Zvakawanda, tichaongorora zvakakwana zvese zvinouya zvemagetsi zvisati zvave mukati imba yedu yekuchengetera.
Prototype uye Diki-kusvika-Mid Zvidimbu Sourcing
Isu tese tinoziva zvemagetsi zvigadzirwa zvekutsvaga ndiyo yakakosha chikamu mukutendeuka kwePBB gungano rebasa uye zvakare inoda hombe kupera kwesimba, zviwanikwa uye nenguva yacho. Inofananidzwa neBhuku pcb gungano, iyo Prototype pcb gungano ichave isina huremu kune mainjiniya uye vagadziri. Pcbfuture yakagadzira nzira inowanisa yekutenga inoita kuti isu tigone kuwana uye titore zvikamu zvinodikanwa nekukurumidza. Tichivimba nekubatana kwepedyo kwechikwata, tinogona kukurumidza kudzokorora iyo BOM, kunyangwe iri prototype kana vhoriyamu mirairo. Zvakare zvinogona kutibatsira kuti tiwane dzakaomarara-kuwana-zvidhori zvakare.
Gore rega rega, pcbfuture ichitenga nhamba hombe yezvinhu kubva kune vanoziva vanogovera uye vanogadzira zvigadzirwa. Huwandu hukuru hwekutenga hunotibvumidza kuwana mutengo wakaderera kubva kwavari. Izvi zvinotibatsira kudzikisa mutengo wedu izvo zvakawedzera kutigonesa kupfuudza mabhenefiti kune vatengi vedu. Yedu yakafara chiyero turnkey pcb gungano rairo inoderedza kudiwa kwekuwedzera kweyekuverengeka yekuchengetera kwezvinhu zvemagetsi kwatiri.
Chinangwa chedu chekutanga ndechekugadzira pcb kugadzira, zvinoriumba Sourcing uye gungano remagetsi sebasa redu, uye rega vatengi vedu vatarise pane zvemagetsi enjiniya uye dhizaini.
Kuti uwane fungidziro yePBB Assembly yemutengo weprojekiti yeramangwana, ndapota tumira chikumbiro chako ku sevhisi @ pcbfuture.com.
Yepasirose inotungamira yakadhindwa wedunhu bhodhi kugadzira uye gadzira gadziriro
--- Iva wako akavimbika Partner--